Yope October 9, 2017
အလှမယ်တစ်ယောက် ပြိုင်ပွဲတစ်ခုပြိုင်တော့မယ်ဆိုရင် စည်းမျဉ်းကို သေသေချာချာလေ့လာသင့်တယ်လို့ Miss Supranational 2014 Winner ဟန်သီက ပြောပါတယ်။ Red Chair မေးခွန်းတွေကို သူဘယ်လိုပြန်ဖြေထားသလဲ ကြည့်လိုက်ကြရအောင်
Yope February 9, 2017
Red Chair meet with Nga Pyaw Gyaw
ဒီမိုကရေစီ အစိုးရလက်ထက်မှာ ပြက်လုံးတွေ ရှားလာတယ်ဆိုတဲ့ ငှက်ပျောကြော် YOPE ရဲ့ မေးခွန်းငါးခုကို Red Chair မှာထိုင်ပြီး ဘယ်လိုပြန်ဖြေထားလဲ။
RED CHAIR MEET ZUN WAI YAN Presented by YOPE
Yope June 15, 2017
မင်္ဂလာပါ YOPE သူငယ်ချင်းတို့ရေ. X-Factor ရဲ့ First runner up ဖြစ်ပြီး လက်ရှိမှာ တစ်ကိုယ်တော်အခွေ ထွက်ရှိထားပြီးဖြစ်တဲ့ အဆိုတော် ဇွန်ဝေယံ YOPE ရဲ့ မေးခွန်းငါးခုကို သူဘယ်လိုပြန်လည် ဖြေဆိုထားလဲ ဆိုတာ ကြည့်လိုက်ပါဦးနော်။
RED CHAIR meets Actor Daung
Yope January 25, 2017
မင်္ဂလာပါ YOPE သူငယ်ချင်းတို့ရေ.. ဒီနေ့ RED CHAIR ပေါ်ရောက်ရှိလာသူကတော့ ဆာတိုရီ ရုပ်ရှင်ထုတ်လုပ်ရေးမှ မင်းသား ဒေါင်း ဖြစ်ပါတယ်. သူက yope မေးခွန်း ၅ ခုကို ဘယ်လို စိတ်ဝင်စားစရာ အဖြေတွေပြန်ဖြေပေးမလဲဆိုတာကိုတော့ video မှာကြည့်ပြီး အားပေးပါဦး. RED Chair ပေါ်မှာ ဘယ်လို အနုပညာရှင်တွေ အောင်မြင်နေသူတွေ ထိုင်ပြီး Yope ရဲ့ မေးခွန်း ၅ ခုကို စိတ်ဝင်စားစရာအဖြေတွေပေးသွားလဲဆိုတာကို ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျ www.yope.com.mm မှာ ပြန်လည်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်.
RED CHAIR MEETS ACTRESS KHIN WINT WAH
Yope June 30, 2017
” ကိုယ်ချစ်တဲ့သူတွေက ချစ်တဲ့မျက်စိနဲ့ကြည့်ပေးတဲ့အတွက် ပျော်ပါတယ် ” YOPE RED CHAIR မှာ တွေ့ဆုံပေးထားတဲ့သူကတော့ ပရိသတ်တွေရဲ့ ချစ်ခင်နှစ်သက်ခြင်းကို ရရှိထားတဲ့ သရုပ်ဆောင်မော်ဒယ် ခင်ဝင့်ဝါ ဖြစ်ပါတယ်. သူက YOPE RED CHAIR မေးခွန်းတွေကို ဘယ်လိုဖြေပေးသွားလဲဆိုတာ ကြည့်ပါဦး. အခု အစီအစဉ် တွေကို YOPE page ကနေ ကြာသာပတေးနေ့တိုင်းတင်ဆက်ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ် .video ကို ကြည့်ပြီးရင် LIKE & SHARE လုပ်ပြီး အားပေးခဲ့ဖို့ မမေ့နဲ့နော်. . www.yope.com.mm www.mizzima.tv
RED CHAIR MEETS ACTRESS SHWE THAMEE
Yope May 10, 2017
မင်္ဂလာပါ YOPE သူငယ်ချင်းတို့ရေ. ဒီနေ့ YOPE ရဲ့ RED Chair ပေါ်ကို ရောက်ရှိလာသူကတော့ လက်ရှိ အနုပညာ လှုပ်ရှားမှုအဖြစ် ဆရာကြီး မင်းသိင်္ခ၀တ္ထု ထဲက ဇတ်ကောင် ‘မနုစာရီ’ အဖြစ်သရုပ်ဆောင်ရိုက်ကူးနေသူ သရုပ်ဆောင် ရွှေသမီး ဖြစ်ပါတယ်။ သူရဲ့ YOPE မေးခွန်းတွေအတွက် အဖြေတွေကို တော့ သူငယ်ချင်းတို့ ကိုယ်တိုင် ကြည့်ရှုပေးပါဦး။ www.yope.com.mm
RED CHAIR MEETS ANAGA
Yope August 3, 2017
ရက်ပ်ပါ တွေရဲ့ ဆိုပုံဆိုဟန်တွေနဲ့ အ၀တ်အစားတွေကို လူတွေက အမြင်စောင်းကြတယ် လို့ ပြောလာတဲ့သူကတော့ HIP HOP Generation ရဲ့ first generation အဖြစ်ထွက်ရှိခဲ့တဲ့ ACID အဖွဲ့ဝင်တစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ သူက RED CHAIR မေးခွန်းတွေကို ဘယ်လိုပြန်ဖြေပေးထာမလဲ? www.yope.com.mm www.mizzima.tv www.mizzimaburmese.com www.mizzima.com #YOPE_REDCHAIR